FANAFIHANA MITAM-PIADIANA MIAMPY FANOLANANA : Jiolahy miisa 5 voasambotra teny Ankasina
Lehilahy miisa dimy no voasambotry ny Polisy teny Ankasina, Antananarivo renivohitra ny 7 avrily lasa teo noho ny fanafihana mitam-piadiana miharo fanolanana. 12 avril 2019
Raha ny tatitra voaray avy amin’ny mpitandro filaminana, ny alakamisy faha 28 marsa dia nisy fanafihana mitam-basy miaraka amin’ny antsy lava sy basy teny amin’ny tokantrano iray tetsy Andohatapenaka. Rehefa tonga teny an- toerana ny polisy dia mbola nifatotra teo ambony fandriana ilay renim-pianakaviana sy ilay zanany vavy iray raha toa kosa ka lasan’ireo jiolahy ny zanany vavy miisa roa.
Tsy lavitra ny tranon’izy ireo kosa no nahitana ireo vehivavy miisa roa noentin’ireo olon-dratsy izay efa niharan’ny fanolanana. Ny sabotsy 6 avrily ihany koa dia vehivavy iray mipetra-drery no lasibatr’ireo jiolahy ka rehefa nalain’izy ireo ny entana dia naolan’izy ireo ity vehivavy mitokan-trano ity. Tsy nipetra-potsiny ny Polisy manoloana ireo fanafihana misesisesy ireo. Nitohy ny famotorana ka ny 7 avrily dia olona miisa efatra no voasambotry ny Polisy miady amin’ny heloka bevava sy ny Polisy avy ao amin’ny boriborintany fahafito teny Ankasina izay fantatra fa isan’ny tompo-marika tamin’ireo fanafihana mitam-piadiana miharo fanolanana ireo.
Nisy ihany koa olona roa avy voasambotra ny andron’ io 7 avrily io teny amin’ny 67ha noho izy ireo nividy entana vao avy nangalarin’ireto jiolahy ireto. Mitovy hatrany moa ny fanafihan’izy ireo tokantrano ka ireny fianakaviana tsy misy lehilahy ireny no tena kendren’ireto olon-dratsy ireto. Niaiky ny heloka vitany moa izy enina mirahalahy ireto ary natolotra ny Fitsarana androany.